Ireo toerana 5 tsara indrindra hitsidihana an'i Kroasia
Aiza no handehanana any Kroasia
Any amin'ny faritra atsinanan'i Eoropa atsinanana sy atsinanana, Kroasia dia manana zavatra hanolotra ny karazan'olona rehetra. Ny morontsiraka avaratr'i Adriatic miisa 3900 maily dia misy nosy sy nosy maherin'ny 1200, ary mahafinaritra ny sainan'ny masoandro sy ny masoandro; Ny valo iraisam-pirenena UNESCO momba ny herin'ny maotera dia mahagaga an'ireo tia ny tantara; Ny vala nasionaliny valo dia manintona ny mpankafy natiora; ary ireo tanàna sy tanàna marobe izay feno Romanina sy Byzantine rava, fialan-tsasatra tamin'ny vanim-potoana Venetiana, ary ireo mpankafy ny trano sy ny haitao any Austro-Hungarian. Ity dia firenena kely, saingy tsy mitovy amin'ny firenena amin'ny firenena, mahita fa mety ho sarotra ny manapa-kevitra ny amin'izay handehanana sy ny zavatra hitrandrahana aloha. Ireto ny loha-laharana faran'ny voalohany ho an'i Kroasia.
Ny tanànan'i Dubrovnik , tanàna mimanda , dia iray amin'ireo faritra manan-tantara indrindra any Kroasia nandritra ny am-polo taona. Saingy ny rindrina, ny vavahady ary ny tilikambon'ny tanàna dia nampiasaina ho toy ny fitsangatsanganana ao amin'ny Game of Thrones dia nanosika azy teo an-tampon'ny lisitry ny bokiny. Nanjary nilaina ihany koa ny fiatoana amin'ny sambo maro amin'ny seranam-piaramanidina manerana an'i Mediterane ary io tanàna manan-tantara any Kroasia io dia manana mpitsidika maherin'ny iray tapitrisa amin'ny 2016.
Ny tanjaky ny reniranon'i Dubrovnik dia ny rindrim-bato matevina manomboka amin'ny taonjato faha- 10 izay mandrakotra ny tanàna tranainy amoron-dranomasina ary tafiditra ao anatin'ilay lalana an-tongotra iray lehibe miisa 1.2 km. Avy eto dia misy fomba fijery mahavariana momba ny tafo an-teratany, ny làlan-dalamby, ary ny tilikambom-piangonana avy amin'ny tanàna efa misy ny UNESCO, miaraka amin'ny ranom-boaloboka ao amin'ny Ranomasina Adriatika ho toy ny lavaka aoriana. Ny hafa tsy maintsy ahitàna dia ahitana ny toerana toy ny fiangonana faha- 16 an'ny Fiangonana Blaise, ny Monastera Franciscan, ny Loharanon'i Onofrio, ary ny Lapan'ny Rector - fa ny fomba tsara indrindra ahafahana miaina Dubrovnik dia ny hivezivezena ireo làlamby henjehin'ny mpandeha an-tongotra ary hahita ireo harena miafina miafina : Toeram-pisakafoanana romantique, trano fatoriana kely iray, loharano iray an'arivony taona, tokotanin'ny voninkazo iray feno voninkazo.
Ranomasina amoron-dranomasina Rovinj no tanàna malaza indrindra any Istria, faritra andrefana any Kroasia. Ny fiandrasana ny fotoanan'ny Romanina, ilay tanàna tranainy be zotom-pon'i Rovinjana dia miparitaka any anaty saikinosy boribory izay misamboaravoara ao amin'ny Ranomasina Adriatika, ary misy tranobe manintona sy tranolahy Venetiana teo aloha.
Ny fiampitana ny lanitra dia ny tilikambom-pokonolona miisa 197 metatra ao amin'ny Fiangonana Euphemia. Ny fiakarana ny dingana 200 ety amin'ny tilikambo dia nahazo valisoa mahavariana avy eny an-tampon-trano sy lalan-kely ao amin'ilay tanàna tranainy, ary ireo nosy vitsy kely manodidina ny morontsiraka. Ny fanesorana ny fiangonana dia ny Grisia voasambotra miaraka amin'ny galeria sy fivarotana mametraka tsangambato, lokanga, ary zavakanto ataon'ny mpanakanto eto an-toerana. Ny fiposahan'ny ranomasina dia manitatra ny atsimo manoloana ny seranam-piarandrihana - izay ahitan'ny mpanarato manamboatra ny haratony, any amin'ireo trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana maromaro, ary ny tora-pasika fotsim-bolana malaza amin'ny mpikaroka masoandro.
Ny renivola Kroaty dia tsy niraharaha loatra ny mpizahatany izay hanamboatra sambo ho an'ireo tora-pasika sy tanàna amoron-dranomasina amoron-tsiraka. Fa Zagreb kosa dia manintona mpitsidika maro isan-karazany noho ny famokarana eklektika avy amin'ny architecture-hongroà, ny tranon'olona sosialista, ny zavakanto an-dalavaly, ny habetsaky ny tranom-bakoka sy ny galleries, ary ny valan-javaboary mangina sy ny kianja miafina. Ny kianjan'i Ban Jelačić ao afovoan-tanàna dia mitebiteby amin'ny fotoana rehetra: io toerana io no ahitana ny trambe ao an-tanàna, ary ireo cafes maro eto dia toerana fivoriana malaza.
Ny dingana vitsivitsy any avaratra no Dolac, ny tsimokaretina voankazo sy legioma mivelatra, ary manitatra any andrefana sy mianavaratra avy eto dia ny làlan-tongotra mitandahatra sy ny lapa miisa 19 sy tranon'ny tranobe tsara tarehy. Ireto ny hevi-dehibe: Ny Tranon'ny Kianja Mainty, ny Tranom-Bakoka Strossmayer, ary ny tranom-bakoka toy ny tranom-bakoky ny tanànan'i Zagreb, ary ny tranom-bakoka mozika malaza hatramin'izao. Ny hafa tsy maintsy atao dia ahitana ny varavarankely ao amin'ny fivarotana maromaro ao an-tanàna amin'ny famolavolan-kevitra an-dalam-pandrosoana, manamboatra labiera vita amin'ny labiera iray amin'ny iray amin'ireo barika maromaro, mandehandeha amin'ny alàlan'ny tsenan'ny paraky alahady ao Britanski trg, ary mandehandeha ny zaridaina botanika atmosfera.
Ny tanàn-dehibe faharoa any Kroasia dia iray amin'ireo toerana lehibe indrindra, noho ny toerana amoron-dranomasina any amoron'ny morontsirak'i Dalmatia sy ny lapan'ny Diokletiana fahaenina faha-4 amin'ny taonjato faha-4 izay miorina amin'ny tanàna taloha. Ny fidirana amin'ny alàlan'ny vavahadin-tseranana efatra, ity UNESCO World Heritage Site ity dia tranobe misy rindrina sy tanàna kely ao aminy, izay misy làlambe misy làlana ety manodidina ny 400,000 square meters.
Misy tranobe tranainy maherin'ny 200 taona ao anatin'io faritra manan-tantara io, anisan'izany ny fiangonana sy trano fiangonana, tranom-bakoka, trano fisotroana kafe ary fivarotana trinkets. Ny foiben-toeran'ny katedralin'i St Domnius dia ao am-pony, ary ny fiakarana ny tilikambon'ny lakolosim-baravarankeliny dia maneho ny fomba fijery tsara momba ny toeram-pambolena iray manontolo, ary koa ny seranana Split ary ny tendrombohitra mankany avaratra. Ny vavahady atsimo, antsoina hoe vavahady varahina, dia manokatra ny vavahadin-drenirano Riva. Miara-misakafo amin'ny trano fisotroana kafe sy trano fisakafoanana, mahavariana amin'ny fotoana rehetra, ary io no toerana ahitàna sy hita. Split ihany koa ny fantsom-bokatra ho an'ireo nosy Brač, Hvar, Korčula ary Vis, izay misy serivisy tsy tapaka mampifandray azy ireo any amin'ny tanibe. Ny lalao Thrones mpankafy dia hahafantatra fa ny sivy kilaometatra avy ao Split dia klistftop Klis fiarovana izay nasongadina tao amin'ny fahitalavitra ihany koa ho tanànan'ny Meereen.
Ny Valan-javaboarin'i Plitvice Lakes dia iray hafa an'ny UNESCO ho an'ny lova eran-tany ary izy no lehibe indrindra sy be mpitsidika indrindra ao amin'ny valan-javaboarin'i Kroasia. Ny velarantany dia miisa 114 kilaometatra toradroa, misy siramamy miisa 16 miendrika loko manga sy maitso izay mifandray amin'ny cascades sy ny rano. Elatra kilaometatra maromaro no mitsambikina mankany amin'ny valan-javaboary mandalo amin'ny ala kesika, jiro, hazo ary beeche eny an-dalana. Ny lalam-baravaran-kazo dia manaloka ireo farihy, miaraka amin'ireo rindrina mandeha amin'ny renirano sy renirano.
Ny zaridaina dia mahafinaritra ny mijery any amin'ny vanim-potoana ary samy manana palette amin'ny loko isan-taona. Ny volana amam-potoana fahavaratra anefa dia tena be atao, miaraka amin'ireo mpitsidika isan'andro miisa 15.000, ary noho izany antony izany ny lohataona sy ny fahalavoana no fotoana tsara indrindra hitrandrahana ny valan-javaboary. Ireo mpitsidika izay manapa-kevitra ny hijanona ao amin'ny hotely iray telo ao amin'ny valan-javaboary ary afaka manomboka ny loha aloha alohan'ny handehanan'ny fiara mpitondra mpizahatany, ary manana ny tapakilan'ny fidirana amin'ny andro faharoa.
Zagreb: Capital City any Kroasia
Ireo Top 10 Fahitana ao Dubrovnik
Ireo Nosy Top 10 Nitsidika an'i Kroasia
Ireo 12 Topy notadiavina tany Kroasia
Ny 9 Best Dubrovnik Hotels 2018
Ahoana ny fomba hisakanana ny RV Black Water Tanks
Akron Ohio St. Patrick's Activities
Ahoana no fomba anaovan'i Ubair manao dia lavitra ho an'ny fiaramanidina manokana
Review: ExOfficio Bugsaway Mens Lumos Hoody
Fianakaviana tsara indrindra any Ohio
Aiza no hividianana sakafo, fivarotana ary milalao any Disney Springs
Ny ExOfficio BugsAway Apparel dia natsangana ho an'ny mpizaha traikefa
Inona no tokony hatao any Newport, Rhode Island
Toerana Grika any Italia